अब होन्डाको सीबी-३५० डीएलएक्स नेपालमा, यस्तो छ यसको विशेषता ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अब होन्डाको सीबी-३५० डीएलएक्स नेपालमा, यस्तो छ यसको विशेषता !
नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले बहुप्रतिक्षित होन्डाको सीबी-३५० डीएलएक्स सार्वजनिक गरेको छ ।
स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिद्वारा युट्युबमा प्रिमियर गरिएको एक भिडियोमार्फत यो बाइकलाई सोमबार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
यद्यपि निषेधाज्ञाको अवधिभर सो बाइक बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि ५० हजार रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराइने कम्पनीको भनाइ छ । नजिकको होन्डा सोरुम वा होन्डा नेपालको वेबसाइटमार्फत सो बाइक बुकिङ गर्न सकिने छ । बुकिङका लागि २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।नेपाल अटो
सिंगल चार्जमा ४ सय किमी गुड्ने निसान लिफ नेपाली बजारमा भित्रिदैं, टिजर सार्वजनिक
निसानको बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कार निसान लिफ नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ । गत वर्ष
फोर्स मोटर्सले न्यु जेनेरेसन अफ रोडर एसयूभी गोर्खाको लन्चिङ समय पहिलो पटक स्पष्ट गरेको छ
नयाँ मारुती सुजुकी सेलेरियो लन्च हुँदै, यस्तो छ विशेषता !
मारुती सुजुकीले फेस्टिभल सिजनमा न्यु जेनेरेसन मारुती सुजुकी सेलेरियो लन्च गर्ने तयारी रहेको छ ।
हिरोले ल्याउँदै छ ग्ल्यामर एक्स्टेक बाइक, होन्डा साइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
हिरो मोटोकर्पले हाल बजारमा प्रचलित ग्ल्यामर भन्दा माथिल्लो भर्सनको रुपमा ग्ल्यामर एक्सटेक (XTEC) ल्याउने भएको
मारुती सुजुकीको नयाँ अल्टो कार २०२२ मा लन्च हुने
मारुती सुजुकीको नयाँ अल्टो कार परीक्षणको समयमा भारतीय सडकमा देखा परेको छ । कम्पनीले सो
टाटा नेक्सनको २ लाखौ कार रोल आउट, यस्तो छ बिषेशता !
भारतमा टाटा मोटर्सले आफ्नो नेक्सनको २ लाखौ कार रोल आउट गरेको छ । टाटाको लोकप्रिय